Tag: hutachiona hwekutengesa | Martech Zone
Tag: hutachiona hwekutengesa
Dave Balter, muvambi weBzzAgent, anoita basa rakakura kutsanangura mutsauko weBuzz, Viral uye Izwi reMuromo Kushambadzira mune ino shanduro yeTechThis. Heano mamwe ezvinyorwa zvine tsananguro huru dzaDave: Chii chinonzi Izwi reMuromo Kushambadzira? Izwi reMuromo Kushambadzira (WOMM) ndiyo svikiro rine simba kwazvo pasi. Iko kugoverana chaiko kwemaonero nezve chigadzirwa kana sevhisi pakati pevaviri kana kupfuura vatengi. Ndozvinoitika kana vanhu vava
China, Gumiguru 2, 2014 NeChishanu, Gumiguru 3, 2014 Douglas Karr
Nekuzivikanwa kwemasocial media, ini ndinotarisira kuti ruzhinji rwemabhizinesi ari kuongorora ese mishandirapamwe yavanoita netariro yekugovaniswa kuburikidza neshoko remuromo kuti riwedzere kusvika uye simba. Chii chinonzi kushambadzira kweViral? Kushambadzira kwehutachiona kunoreva hunyanzvi uko vagadziri masystem nemaune ekugadzira zvemukati izvo zviri zviviri zviri nyore kutakurika uye zvine hukama zvakanyanya kuti zvigovaniswe nekukurumidza nevanhu vazhinji. Iyo mota ndicho chinhu chakakosha -
Sezvo ndaona kakapetwa kagumi ehurongwa hwehutachiona hunofa pane kurarama, handina chokwadi chekuti ndinotenda zvakanyanya kuti pane imwe mhando yehutachiona inokunda algorithm. Chokwadi kuti mamwe masangano ari nani kupfuura mamwe… asi handitendi kuti chero munhu anogona kuvimbisa hutachiona nzira ... kunze kwekunge vaisa imwe BIG mari uye mibairo yekuitsigira. Izvo zvakati, pane zvimwe zvakajairika maitiro kune hutachiona nzira. Pakupedzisira hutachiona hunoda kumutsa vamwe